चार महिनाको व्यापार घाटा पोहोरभन्दा आधा खर्ब कम
Kumar Shrestha calendar_today १७ मङ्सिर २०७६, 3:00 am
काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापारमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । चालु वर्षमा देशको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब एक चौथाईले बढेको हो । यो वृद्धिदर पछिल्लो चार महिनामै कायम छ । निर्यात वृद्धिदर एक चौथाई रहँदा आयात भने गत आवको यही अवधिभन्दा कम भएको छ । यसो त चालु आवको सबै महिनामा अघिल्लो आवको भन्दा कम आयात भएका छन् ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात २३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवधिमा वस्तु तथा सेवाको आयात भने पछिल्लो वर्षको भन्दा ६ दशमलव ९२ प्रतिशतले कम भएको छ ।
विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिक अन्त्यसम्म ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । गत आवको यही अवधिमा २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो ।
आयात भने गत वर्षको ४ खर्ब ८५ अर्ब ७५ करोडबाट घटेर ४ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । निर्यात बढेर आयात घट्दा व्यापार घाटामा थोरै राहत मिलेको छ । विभागका अनुसार नेपालको व्यापार घाटा ४ खर्ब ५४ अर्ब ४७ करोडबाट ८ दशमलव ९ प्रतिशत (करिब ५० अर्ब) ले घटेर ४ खर्ब १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ ।
व्यापार घाटा सुधारमा केके वस्तु तथा सेवाको योगदान ?
विभागका अनुसार नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुमा तेल तथा बोसोजन्य उत्पादनको हिस्सा बढी छ । चार महिनामा १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको तेल तथा बोसोजन्य वस्तुको निर्यात भएको हो । यो कुल निर्यातको करिब एक तिहाइ हो । निर्यात बढ्नुमा कफी, चिया र मसलाको योगदान पनि उस्तै छ । चार महिनामा २ अर्ब ९४ करोड ५७ रुपैयाँको कफी तथा चिया निर्यात भएको छ । यसैगरी २ अर्ब ८१ करोड बराबरको मानवनिर्मित फाइबर, २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको कार्पेट निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
चालु आवको पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा कम हुनुको कारण निर्यात बढ्नुमात्र होइन । यसमा आयात उल्लेख्य मात्रामा घट्नु पनि हो । विभागका अनुसार जैविक इन्धन तथा सवारी साधानको आयातमा आएको कमी, फलाम तथा स्टिलको कम खपत, हवाइजन्य पार्टपुर्जाको आयात कम भएको छ ।
विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको जैविक इन्धन, तेल तथा प्रशोधित उत्पादन आयात भएको छ । यसैगरी ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बोइलर, मेसिनरी तथा मेकानिकल सामग्री, ३५ अर्ब २७ करोड विद्युतीय सामग्री आयात भएका छन् ।
यस वर्ष सवारीसाधन, प्लास्टिकजन्य सामग्री, हवाई पाटपुर्जा तथा जहाजको आयात पनि अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिक अवधिको आयात–निर्यात तथ्यांकका केही महत्त्वपूर्ण तथ्यः
– निर्यातको तुलनामा १२ दशमलव ४ गुणा बढी मूल्यको आयात
– २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको व्यापार नाफा कार्पेटमा
– ६५ अर्ब २१ करोडको जैविक इन्धन आयात निर्यात शून्य
– तेल तथा बोसोजन्य वस्तुमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा
– सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार भारतसँग, आयातः २ खर्ब ७२ अर्ब ५७ करोड, निर्यातः २४ अर्ब २६ करोड, व्यापार घाटाः २ खर्ब ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
– नेपालमा वस्तु तथा सेवा आयात हुने शीर्ष १० देशः भारत, चीन, इन्डोनेसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त अरब इमिरेट्स, स्विटजरल्यान्ड, साउदी अरेबिया, थाइल्यान्ड, फ्रान्स
– नेपालबाट वस्तु तथा सेवा निर्यात हुने शीर्ष १० देशः भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, टर्की, चीन, बंगलादेश, फ्रान्स, जापान, इटली
– २४ देशसँग व्यापार नाफा, सबैभन्दा बढी डेनमार्कसँग (रु. ५ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ) दोस्रोमा नर्वे
– ६ देशबाट शून्य आयात, २८ देशमा शून्य निर्यात
– २९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात, १२–१२ अर्ब को स्टिल र पेट्रोल, करिब ९ अर्बको एलपीजी ग्यास
– पाम तेल ८ अर्ब ३६ करोडको निर्यात
–भटमास तेल, २ अर्ब २ करोड रुपैयाँको निर्यात